Isitolo esidayisa yonke impahla ephathekayo Ephefumulayo Exerciser 3 Amabhola Spirometer Lung Training Medical Medical Manufacturer and Supplier | MoLoLo
Ephathekayo Deep zokuphefumula Exerciser 3 Amabhola Spirometer Lung Training Medical Kudivayisi
Amabhola amathathu i-spirometer iyithuluzi lezokwelapha elisiza iziguli zithuthukise ukusebenza kwamaphaphu azo futhi ngiyithuluzi elisebenzayo lokuvikela izinkinga zamaphaphu. Ngemuva kokuhlinzwa okuthinta umsebenzi wokuphefumula, ikakhulukazi ukuhlinzekwa emaphashini, njengokuhlinzwa kwesisu idivayisi isiza ekuphefumuleni.
Izinsizakusebenza Zokuphefumula Zokuphefumula (i-Respiratory Exerciser) zisiza ukuthuthukisa, ukuthuthukisa kanye nokugcina ukuqina komzimba.
Lesi Sisetshenziswa Sokuphefumula Esiphefumulayo (i-Respiratory Exerciser) senzelwe i-gymnastics yokuphefumula ezimele futhi elawulwayo.
Ikakhulu, ifanele iziguli ezilele embhedeni. Ngakho-ke, ukukha phezulu futhi yingakho ukuphefumula okunganele kuholela ekungeneni ngokwanele kwezingxenye eziphansi zamaphaphu. Kungenzeka, ukuthi kuzoba nokuqoqwa kwemfihlo (ikakhulukazi i-phlegm) ezingxenyeni ezingezansi zamaphaphu. Ngakho-ke, kuzokhuthazeka ukuvuvukala kwezicubu zamaphaphu.
Ukuze uvimbele lokho, kufanele uzijwayeze ukusebenzisa i-therapy-exerciser ngokuphefumula kaningana ngosuku.
Futhi abasebenzi bezokwelapha bangafundisa neziguli ukuthi zisebenzise kanjani lezi zinsiza zodwa njengoba zizophuma esibhedlela.
A. Hlala onqenqemeni lombhede wakho uma kungenzeka, noma uhlale phezulu ngangokunokwenzeka embhedeni.
B. Bamba i-spirometer yokukhuthaza endaweni eqondile.
C. Beka okokukhuluma emlonyeni wakho bese uqinisa izindebe ngokuqinile.
D.Breath ngokuhamba kancane nangokujule ngangokunokwenzeka. Vumela ibhola lokuqala lisebenze ezansi. Ikamelo lama-600cc ukukhuphukela phezulu; amanye amabhola amabili asesezansi.
E.Khulisa umoya wakho, vumela ibhola lesibili egumbini lama-cc angama-900 ukuthi likhuphukele phezulu; ibhola lesithathu lisesezansi.
F.Gcina ukukhulisa umoya wakho; vumela womathathu amabhola ukuthi anyukele phezulu.
G. Bamba umoya wakho isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Bese ukhipha okokukhuluma bese ukhipha kancane kancane bese uvumela amabhola ukuthi awe phansi kwekholomu.
H. Phumula imizuzwana embalwa bese uphinda izinyathelo eyodwa kuya kweziyisikhombisa okungenani izikhathi eziyi-10 njalo ngehora.
I. Ngemuva kwesethi ngayinye yokuphefumula okujulile okungu-10, khwehlela ukuze uqiniseke ukuthi amaphaphu akho acacile uma unokusikwa, sekela ukusikeka kwakho lapho ukhwehlela ngokubeka umqamelo ngokuqinile kuwo.
J. Uma usukwazi ukuphuma embhedeni ngokuphepha, hamba njalo futhi ufunde ukukhwehlela.
Igama lomkhiqizo I-PVC 3 ibhola yokukhuthaza i-spirometer
Izinto Ibanga lezokwelapha i-PVC
Amandla I-600/900/2001 (cc / isekhondi)
Abasebenzisi Umuntu omdala, ingane, usana
Umbala Iwolintshi, luhlaza okwesibhakabhaka, luhlaza okotshani noma inkambiso
Ukupakisha 1pcs / ibhamuza nokupakisha
Ukusetshenziswa Isibhedlela / Ezokwelapha / Umtholampilo / Ukuhlolwa Komzimba
Isetshenziselwa ukubuyisela ukuphefumula okujwayelekile kweziguli ezisanda kuqeda ukuhlinzwa kwe-thoracic nesisu.
Thayipha Izimpahla Zokuzivocavoca Zokuphefumula Kwezokwelapha
Ukuvakashelwa kwensimu yokusekelwa kwe-2, ukuhlolwa kwekhwalithi, ukuthuthwa kwempahla ngesikhathi
Langaphambilini 100% Medical Ibanga le-PVC Elivaliwe Amanxeba Isistimu Yentwasahlobo Uhlobo lwekhwalithi ephezulu yokusetshenziswa okukodwa kokuhlinzwa
Olandelayo: Alahlwayo kuhlinzwa ngomlomo isiponji swab induku
Inhloso Yesikhuthazo se-Spirometer
Isikhuthazi Spirometer Ibanga elijwayelekile
Isikhuthazo Spirometer Walgreens
Ngabe Kukala Kanjani I-Spirometer